Ady tototry ny Roma, QuickScan, Ny fanakanana maty ary lalao sy fampiharana maimaimpoana na misy fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ankehitriny dia tena afaka milaza izany amin'ny hafanam-po isika: Zoma ihany amin'ny farany! Raha vantany vao miala ny fotoam-pianaranao na miasa ianao, ny ankamaroanareo rehetra dia hanana roa andro mialoha anao hifanaraka araka izay azo atao amin'ny adidy isan'andro, mivoaka, mifalifaly amin'ireo namana sy fianakaviana, ary maninona !, manaova kamo kely, mahatsapa rendrarendra foana. Ary ho anao hanana fotoana tsara kokoa amin'ity faran'ny herinandro ity, anio ao amin'ny Actualidad iPhone dia itondrako anao a fisafidianana lalao sy fampiharana maimaim-poana, na misy fihenam-bidy lehibe.
Raha tiako ny mampatsiahy foana izay rehetra mamaky antsika, dia aza hadinoina fa ireto tolotra sy fanentanana manaraka ireto dia Fotoana voafetra; Midika izany fa, afa-tsy ny faningana sasany, dia tsy afaka manome antoka afa-tsy ny maha-ara-dalàna azy io amin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity, saingy tsy afaka milaza aminao izahay hoe rehefa mifarana ny promo noho ny antony tsotra dia tsy nampahafantatra izany ilay mpamorona resahina. Misintoma izao (indrindra raha maimaim-poana) ary mieritrereta avy eo.
2 Lumos: Sun sy Moon Tracker
3 ROME: Ady tanteraka
4 FrameMagic Premium - mpanamboatra collage rehetra ao anaty iray
5 Ny maty manakana
6 Remote Control, Keyboard ary Trackpad an'ny Mac [PRO]
Azonay atao ny manazava kely momba an'ity fampiharana mahasoa ity izay tsy noheverinao an-tsaina akory ny anarany. QuickScan + dia fitaovana iray azonao atao sakano izay rakitra ampiasao fakan-tsary amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch-nao. Mampiditra safidy fanampiny toy ny detection edge automatique izay manamora ny famolavolana ilay rakitra na fanondranana amin'ny endrika PDF na sary.
QuickScan + Manana vidiny 0,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store izy, nefa azonao atao izao ny manafaka azy zato isan-jato.
Lumos: Sun sy Moon Tracker
Lumos dia fampiharana mahaliana izay, amin'ny fampiasana ny nanamafy ny zava-misy, mamela antsika hahita amin'ny fomba marina sy haingana ny toerana misy ny masoandro na ny volana amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny angon-drakitra toy ny fiposahan'ny masoandro, filentehan'ny masoandro, fiposahan'ny volana, ny volana sy ny volana amin'ny daty rehetra, ary avy amin'ny interface tsotra sy tsotra be izy rehetra.
Lumos Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro ao amin'ny App Store, na izany aza izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Lumos: Sun sy Moon Tracker€ 2,29
ROME: Ady tanteraka
«ROME: Ady tanteraka dia a lalao tetika amin'ny fizarana epic, izay manome ny mpilalao ny paikady sy ny tetika hiadiana amin'ny ady mahatalanjona, raha mampiasa diplaomasia, fikafika ary famonoana olona hahafahana mandresy. "
Na dia tsy ho hitantsika maimaimpoana aza amin'ity indray mitoraka ity dia omena fihenam-bidy 20% ao amin'ny App Store izy ireo, manomboka amin'ny € 9,99 ka hatramin'ny 7,99 €. Raha mitady lalao epika amin'ny paikady sy kalitao ianao, dia fotoana tsara azo zakaina ity ROME: Ady tanteraka natokana ho an'ny iPad
ROME: Ady tanteraka€ 10,99
FrameMagic Premium - mpanamboatra collage rehetra ao anaty iray
FrameMagic dia fitaovana tsy mampino ho an'ny iPhone sy iPad izay azonao atao mamorona sary, horonan-tsary ary sary mihetsika mahavariana haingana sy mora ary ao anatin'izany ny "volavolan-taonina, safidy tsy manam-petra, loko, lamina, tonian-dahatsoratra mahery vaika, effets sivana tsara tarehy, safidy lalao malefaka, mozika sy fitantarana."
FrameMagic Manana vidiny 1,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store izy, nefa azonao atao maimaim-poana izao.
"The Blocking Dead" dia lalao ankamantatra zombie. Manana ambaratonga mihoatra ny 70 izy ary ny tsiambaratelo dia ny tsy hamelana ny ati-doha hianjera avy amin'ny lampihazo. Lalao mahafinaritra sy mampiala voly amin'ny fotoana fiandrasana.
Ny maty manakana Manana vidiny 1,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store izy, nefa azonao atao maimaim-poana izao.
Fanakanana maty: Zombie Towermaimaim-poana
Indray mandeha indray izahay dia manolotra ity fitaovana lehibe ity hanova ny iPhone na iPad antsika dia trackpad sy / na fitendry mahomby ho an'ny Mac misy antsika. Mety indrindra izy io rehefa miala ao an-trano isika ary mila miasa milamina kokoa. Fa ankoatr'izay dia izy koa a fanaraha-maso lavitra ho an'ny Mac-nao.
Ny fampiharana fanaraha-maso lavitra dia mamadika avy hatrany ny iPhone sy iPad anao ho lasa lavitra manerantany ho an'ny Mac.
Ampiasao ny rindrambaiko fanaraha-maso lavitra mba hifehezana ny volanao amin'ny Mac anao sy ny zavatra milalao amin'ny rindrambaiko mpilalao haino aman-jery samihafa. Ankafizo ny klavie sy ny trackpad tsy misy tariby izay mandeha amin'ny lavitra rehetra ao an-tranonao na any amin'ny birao. Mandrosoa sy akatona ny rindranasa napetraka ao amin'ny Mac miaraka amin'ny paompy iray. Alaharo ny hetsika raha tokony hatao, ohatra, ampatory ny Mac-nao rehefa vita ny filalaovana ilay sarimihetsika.
Ity rindrambaiko ity dia manana vidiny mahazatra € 2,99, kanefa, izao dia azonao atao amin'ny ampahatelon'ny sanda fotsiny, 0,99 €.
Remote Control & Mouse [Pro]€ 8,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Ady Total Rome, QuickScan, The Blocking Dead ary lalao sy fampiharana maimaimpoana na misy fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafetra
Miverina ireo matoatoa tamin'ny lasa: ny loko mainty iPhone 7 matte, ao anaty fanontaniana